Muqdisho:-Ciidanka DFS ayaa maalintii labaad ka wada magaalada Muqdisho howlgalo lagu sugayo amaanka waxaana ay ciidanaka hakad galiyeen isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga Degmooyinka gobalka Banaadir.
Ciidamada DFS oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa saaka aroortii kula jarmaaday howlgalo iyo baaritaano degmooyinka Hodan, Hawl Wadaag, Wardhiigley iyo Degmada Kaaraan iyaga oo guri guri u galay.
Waxaa sidoo kale oo gabi ahaan xiran maanta wadooyinka waaweyn oo ay aad u isticmaalaan ciidanka AMISOM iyo kuwa DFS gaar ahaan Wadada Maka Al-Mukarama iyo Jidka wadnaha
Dadweyna ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxaa saameyn ku yeeshay howlgalada ka socda maalintii labaad magaalada Muqdisho waxaana kala xiran xaafadaha qaarkood kuwaas oo aan la isku gudbi karin .
Ciidanka DFS ayaa aad u baaraya gawaarida sida gaar ah loo leeyahay iyo kuwa BL-ka iyaga oo ka cabsi qaba in qaraxyo loo adeegsado gawaari laguna weeraro xarumaha muhiimka ah ee ciidanka DFS iyo kuwa AMISOM.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka ee DFS C/Kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in howlgalada ay ciidanka DFS ka wadaan magaalada Muqdisho lagu xaqiijinayo amaanka ,wuxuuna uu sheegay in ciidanka uu sii wadi doono howlagalada ka socda magaalada Muqdisho.